Isicacisi samanzi se-Aquarium: okungcono kakhulu ukuba namanzi acwebe njengekristalu | Okwezinhlanzi
Ukucaciswa kwamanzi e-aquarium kuwusizo olukhulu ekugcineni amanzi ehlanzekile futhi ngaphandle kwalowo muzwa wefu omubi nezinkinga eziningi kangaka zempilo ungadala izinhlanzi zethu. Le mikhiqizo iyashesha futhi kulula ukuyisebenzisa, yize inezinto eziningi okufanele uzicabangele.
Ngalokho, Kulesi sihloko sizokhuluma ngalokho okucacisa amanzi e-aquarium, ngaphezu kokukutshela ukuthi kusebenza kanjani, ukuthi ungayisebenzisa kanjani noma kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenza, kanye namathiphu ambalwa wokugcina amanzi akho ehlanzekile. Njengoba wazi, amanzi ayinto ebalulekile emanzini, ngakho-ke sincoma nokuthi ufunde lezi ezinye izindatshana ezikhuluma ngazo isilondolozi samanzi e-aquarium o amanzi ongawasebenzisa kuma-aquariums.
1 Yini ukucaciswa kwamanzi e-aquarium
2 Ukucacisa kusebenza kanjani
3 Ungayisebenzisa kanjani i-clarifier
4 Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi kuqale ukusebenza
5 Umhlahlandlela wokuthenga
5.2 Izidingo (ezakho ne-aquarium)
6 Ungenza kanjani ukuze ube namanzi acwebezelayo e-aquarium? Amaqhinga
7 Ngingakusebenzisa yini ukucacisa amanzi ku-aquarium enezimfudu?
8 I-aquarium syndrome entsha
9 Ungathenga kuphi okushibhile okucacisa amanzi e-aquarium
Yini ukucaciswa kwamanzi e-aquarium
Isihlanza amanzi ...
I-JBL Clearol - Ukwelashwa ...
I-JBL Yokuhlanza Amanzi ...
Isicacisi samanzi se-aquarium uketshezi ongaqeda ngalo umuzwa wokungcola emanzini e-aquarium yakho aqeda izinhlayiya ezikhona emanzini futhi ezibangela lelo "fu". Lezi zinhlayiya zingangena emanzini ngezimbangela ezahlukahlukene, ngokwesibonelo:
La ukondla ngokweqile, okungadala ukuthi ukudla okungadliwe izinhlanzi zakho zincibilike emanzini (kulokhu amanzi azobukeka sengathi ingilazi iqandisiwe).
El Polvo lokho kudedela amatshe.
I-Las ulwelwe (Lokhu kungaba inkinga uma i-aquarium inokuthinta okuluhlaza). Lokhu kungaqala ukukhula kusuka ezinhlotsheni ezahlukahlukene, njengokukhanya okuningi noma izakhi zomzimba eziningi kakhulu.
Ubukhona be amaminerali ichitheka emanzini, njenge-phosphates noma i-iron, okuzokwenza ukuthi amanzi abonakale empunga noma ansundu.
Noma umhlobiso upende walo uncipha kancane kancane.
Mhlawumbe ngisho lowo muzwa wokungcola ubangelwa i- uhlelo lokuhlunga ngezinkinga (uma kunjalo, kuzodingeka ukuthi uhlanze amanzi futhi ulungise uhlelo lokuhlunga).
Ukucacisa kusebenza kanjani
Uma kwenzeka amanzi e-aquarium yakho ebukeka engacacile, kuzodingeka uthathe izinyathelo zokuwahlanza hhayi kuphela ngezizathu zobuhle.kodwa ngoba kungaba yingozi ezinhlanzini zakho. Ngakho-ke, esinye sezinyathelo zokuqala ukusebenzisa isicacisi samanzi.
Umsebenzi ulula, ngoba okwenziwa yilolu ketshezi kubangela ukusabela kwamakhemikhali okuhlanganisa izinhlayiya ezenza ukuthi amanzi abukeke engcolile aze abe makhulu ngokwanele ukuthi angahlala ezansi kwe-aquarium noma abhajwe ngesihlungi. Inqubo, ngangokunokwenzeka, iyashesha impela, ngoba kuthatha amahora ambalwa ukuhlanza amanzi.
Ungayisebenzisa kanjani i-clarifier
Siyakukhumbuza lokho njalo kufanele ulandele imiyalo yomkhiqizo ukugwema ukwethuka futhi uthole umphumela omuhle kakhulu. Umkhiqizo ngamunye unezilinganiso zawo, yize zonke zisebenza ngendlela efanayo:
Qiniseka ukuthi ifayela lakho le- ulwelwe nezitshalo kuyelashwa nokuthi umkhiqizo ozowusebenzisa uphephile kubo. Uma uzozelapha, linda amahora angama-24 ngaphambi kokusebenzisa ukucacisa.
Lungisa PH wamanzi ku-7,5.
Namathela kumthamo womkhiqizo ngamalitha amanzi akhonjisiwe (iningi likuvumela ukuthi usebenzise ikepisi lemitha futhi ucabangele amalitha amanzi nobulukhuni balokhu besilinganiso). Uma udlula ngokweqile, ungalimaza noma ubulale izinhlanzi futhi wenze nokungcola kwamanzi.
Thela umkhiqizo ngokucophelela emanzini.
Shiya isihlungi sisebenza kuze kube yilapho amanzi ebukeka ehlanzekile.
Eminye imikhiqizo ikuvumela ukuthi uphinde umthamo kuze kube yilapho amanzi ehlanzeke ngokuphelele, noma kunjalo kuzofanele uqiniseke ukuthi kudlule amahora angama-48 phakathi kwemithamo.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi kuqale ukusebenza
Imvamisa ukucaciswa kwamanzi kuyashesha impela, yize kuya ngomkhiqizo. Imvamisa, a 72 isilinganiso samahora (okungukuthi, izinsuku ezintathu) ukuthola amanzi acacile nahlanzekile.
Izicacisi zamanzi ziyi- uhlobo lomkhiqizo oqondile, kodwa futhi banezincazelo eziningi okufanele uzicabangele lapho uzithenga, ngoba kunamamodeli amaningi atholakalayo. Ngakho-ke, kungakuhle ukuthi ucabange ngalokhu okulandelayo:
Abanye abacacisi kukhona ilungele kuphela ama-aquariums anamanzi ahlanzekile, kanti ezinye zihloselwe ikakhulukazi ama-aquariums atshaliwe noma amanzi anosawoti. Ngokunjalo, ezinye azisebenzi emanzini angazange ahlungwe, ngoba aqukethe ukuhlanganisa izinhlayiya ukuze zibhajwe kusihlungi. Ngakho-ke, ngokubheka uhlobo lwe-aquarium esinayo lubalulekile ukuze singasikisi futhi silayishe izinhlanzi zethu.
Eqinisweni, kunezinhlobo eziningi kakhulu zokucacisa esingazithola sibheke nasemachibini, ngezinkathi zonyaka ...
Izidingo (ezakho ne-aquarium)
Ngokunjalo kufanele sibheke futhi sicabange ngezidingo zethu futhi, kunjalo, lezo ze-aquarium. Ngakho-ke, singakhetha umkhiqizo ovele unikeze ukucacisa amanzi noma okuthile okuphelele kakhulu, ngoba kukhona okunye okunikeza amathuba amaningi, njengokulungisa amazinga ezakhamzimba noma i-oxygen, okungaba ngumqondo omuhle uma Udinga usizo olwengeziwe.
Futhi, kukhona izinto zokucacisa ezisheshayo kunezinye, into okufanele uyikhumbule uma uzoyisebenzisa ngesikhathi esisodwa, esimweni esiphuthumayo noma ngezikhathi ezithile ukugcina amanzi ehlanzekile.
Ngokunjalo intengo izothinta lokho esikufunayo. Ukucaciswa okulula kushibhile, kuyilapho lezo ezinokunye okungeziwe kunenani eliphakeme. Umqondo omuhle kungaba ukubala ukuthi yini engabiza kithina ngaphambi kokuthenga noma yini.
Ungenza kanjani ukuze ube namanzi acwebezelayo e-aquarium? Amaqhinga
Ukugcina amanzi ku-aquarium yakho ehlanzekile futhi ecwebezelayo kucace akunzima kakhulu, yize kudinga inani elithile imisebenzi ephindaphindwayo okufanele uyenze njalo kaningi, kodwa lokho kuzoba nomthelela omuhle kakhulu empilweni yezinhlanzi zakho. Ngokwesibonelo:
Bondle ngokwanele ukuvikela ukudla ukuthi kungaqhekeki emanzini futhi kungcolise.
Hlanza ngenetha izinsalela ezintantayo emanzini ngezikhathi ezithile.
Hlanza amatshe njalo ukuze ingadedeli uthuli.
Gcina i- inani elanele lenhlanzi- Ungabi nokuningi kakhulu noma i-aquarium izongcola ngokushesha.
Gcina i- i-aquarium ehlanzekile.
Qhubeka wenze amanzi aguquka njalo (ngezinguquko eziyi-10 kuye kwezingu-15% zamanzi masonto onke, ngokwesibonelo).
Qiniseka ukuthi isihlungi sisebenza kahle futhi uyihlanze lapho kudingeka.
Ngingakusebenzisa yini ukucacisa amanzi ku-aquarium enezimfudu?
Cha, ungalokothi usebenzise isicacisi ku-aquarium enezimfudu. Le mikhiqizo yenzelwe izinhlanzi kuphela, ezingalimaza ezinye izinhlobo.
I-aquarium syndrome entsha
Endabeni yokuthi ufake i-aquarium entsha, Amanzi kungenzeka angacaci futhi ucabanga ukuthi angcolile. Kodwa-ke, kulezi zimo kunalokho ukuthi i-ecosystem ivumelana nesimo sayo esisha. Amanzi abukeka engacacile ngenxa yezinto ezincane kakhulu, ezinjengebhaktheriya, ezivela ezindaweni ezinjengezinhlanzi, ukudla, noma izitshalo. Imvamisa, lapho ama-bacterium esezinzile, amanzi aphinde acace njenge-crystal. Ngakho-ke, uma une-aquarium entsha, kungakuhle ukuthi ulinde isonto ngaphambi kokungeza noma yiziphi izinto zamakhemikhali ezinjengokucaciswa kwamanzi.
Ungathenga kuphi okushibhile okucacisa amanzi e-aquarium
Isicacisi esihle samanzi e-aquarium akunzima kangako ukukuthola, yize kwesinye isikhathi kuye ngokuthi siyaphi sizothola amamodeli amaningi noma ambalwa, ngokwesibonelo:
En AmazonAkungabazeki ukuthi kulapho sizothola khona izinhlobo ezahlukahlukene kakhulu zamamodeli, ngakho-ke uma sidinga okuthile okucacile, noma uphawu oluthile, kuyindawo efanelekile kunazo zonke esingabheka kuyo kuqala. Ngaphezu kwalokho, banokuncane konke, kufaka phakathi imikhiqizo ehamba phambili noma edume kakhulu, njengeTetra, JBL, Flubal, Seachem ...
En izitolo zezilwane NjengoKiwoko noZooplus ngeke uthole ukuhlukahluka okungaka, yize kufaneleke kakhulu uma kunconywa ukuthi uyazi yini ukuthi uzofunani noma uma udinga usizo oluthile, into engcono kakhulu ukuvakashela esinye sezitolo zabo ezingokomzimba , lapho uzothola khona usizo lochwepheshe. Ngaphezu kwalokho, amawebhusayithi ajwayele ukuba nezinhlelo zokwethembeka nokunikezwa okuthakazelisayo okungakusindisa ekuhambeni kwesikhathi.
Ngenkathi ku- isitolo somnyango I-DIY efana neLoyoy Merlin, lapho kunesigaba esincane sezilwane ezifuywayo, ngeke uthole ukucaciswa okuningi kunalokho okubhekiswe kumachibi okubhukuda noma emachibini lapho kungaphili khona izidalwa eziphilayo.
Siyethemba ukuthi sikusizile ukuthi uqonde ukusebenza kwe-aquarium clarifier, umkhiqizo owusizo kakhulu ongawusebenzisa ngendlela ethile nokugcina amanzi ehlanzekile. ye-aquarium yethu futhi, ngakho-ke, ukuthi yinhle kakhulu futhi iyathandeka ezinhlanzini zethu. Sitshele, wake wasebenzisa isicacisi? Sibe njani isipiliyoni sakho? Ngabe uncoma umkhiqizo othile?
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Izesekeli » Ukucaciswa kwamanzi e-Aquarium